Nezvedu - Ningbo Taisen Furniture Co., Ltd.
Isu tiri fekitori yefenicha muNingbo, china ine nyore yekufambisa yekuwana. isu tinonyanya kugadzira tafura yekudyira & cheya, seti yekurara, fenicha yehotera uye OEM (tsika) chigaro uye hotera purojekiti fenicha. Tave tichigadzira fenicha yeprojekti yehotera kwemakore anopfuura gumi.
Isu tine nyika-yepamusoro-soro yekugadzira mutsara wefenicha, yakazara-inodzorwa nekombuta system, advanced central central dust collection system uye isina huruva-yependi kamuri, iyo inyanzvi mukugadzira fenicha, kugadzira, kushambadzira uye imwe-chiteshi sevhisi yemukati inofananidzwa fenicha. Zvigadzirwa zvinosanganisira akawanda akateedzana: Dining set series, furati dzakatevedzana, MDF/PLYWOOD mhando fenicha series, solid wood furniture series, hotel furniture series, soft sofa series and so on. mazinga ebhizinesi, masangano, masangano, zvikoro, imba yevaenzi, mahotera, etc. Zvigadzirwa zvedu zvinotumirwawo kuUnited States, Canada, India, Korea, Ukraine, Spain, Poland, Netherlands, Bulgaria, Lithuania nedzimwe nyika uye matunhu. Ningbo Taisen Furniture Co., Ltd inoronga kuve "inokosheswa" fenicha chigadzirwa chekugadzira uye zvinoenderana ne "mweya wehunyanzvi, hunyanzvi hwemhando" hwakaunza kuvimba nevatengi '. Chiizve, isu tinovandudza mukuvaka uye kushambadzira kwechigadzirwa, edza nepatinogona napo kuyedza kuita zvakanaka. Kambani yedu ichaita nhamburiko dzisingaperi mumativi ese, ramba uchisimbisa nzira mbiri dzekutsinhana, inogara ichivandudza maitiro zvisinei nekugadzira kana kushandiswa kwezvinhu, uye isu tinoshingairira kupa mhinduro dzakakwana dzemusika wefenicha.
Kana iwe uchifarira chimwe chezvigadzirwa zvedu kana uchida kukurukura tsika yekuraira, ndapota inzwa wakasununguka kutibata nesu. Tiri kutarisira kuumba hukama hwebhizinesi hwakabudirira nevatengi vatsva pasi rese munguva pfupi iri kutevera.
Tarisa pane mutengi- ziva kukosha kwekambani kuburikidza nekuramba uchigadzira kukosha kwevatengi
Izvo zvakakosha zvekugadzira kukosha kwevatengi ndezvekubatsira vatengi kuona kuita kwakanaka kwemapurojekiti, kubatsira vatengi nekukurumidza kudzoreredza mari yekudyara, uye kuita kuti vatengi vabudirire. Panguva imwecheteyo, tsvaga purofiti yakakodzera uye uwane kusimudzira kwakanaka kwekambani.
Exhibition & Sample Room
Hofisi & Fekitari